Musharax Madaxweyne Daahir Geelle oo ka hadlay, Sicir bararka kajira dalka, Amniga iyo Doorashada (daawo) – Radio Daljir
Musharax Madaxweyne Daahir Geelle oo ka hadlay, Sicir bararka kajira dalka, Amniga iyo Doorashada (daawo)
Nofeembar 5, 2021 8:37 g 0
Musharax Daahir Geelle oo Shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in sicir bararka dalka kajira uu horay uga digay in laga sii gaashaanto xilligii uu bilaabanayay Cudurka COVID-19 , balse taxadar aan la muujin darteed dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan sicir barar iyo sare kac ku yimid maciishada noocyadeeda kala duwan.
Waxaa uu sheegay in Soomaaliya uu saameeyay dhaqaala yarida kajirta Adduunka intiisa kale, balse tan ugu daran ay tahay shidaal yarida oo sababtay in ay hoos u dhacdo gurmadka loo fidin jiray meelaha ay abaarta kajirto.
” isbedel ayaa jira anaga ma nihin dal wax badan dhoofiya kaliya Xoolaha ayaan dhoofinaa, balse sida aad ogtihiin waa la carqaladeeyay, waxaana ogahay in Markab Xoolo sida oo dalka ka baxay lagu dhibaateeyay Sacuudiga, iyada oo Warqad looga baahan dowladda ilaa iyo hadana ay nala soo xiriiraan Ganacsatadii, iyaga oo ka eed sheeganaya dowladda ayuu yiri ” Musharax Madaxweyne Daahir Geelle.
Musharax Daahir Geelle oo ka hadlayay Arrimaha Amniga ayaa sheegay in sidoo kale dalka ay kusoo kordheen markii maciishada ay adkaatay in dadka Hantidooda la boobo, sidoo kale dagaalo sokeeyo oo dhacay oo qaarkood ay ku lug leeyihiin Ciidamada dowladda Soomaaliya oo amar qaldan la siiyay.
Musharax Madaxweyne Daahir Geelle waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in dadka Soomaaliyeed mar walba ay isweeydiinayaan in dalka ay ka dhacayaan doorashooyin, balse nasiib darro ay tahay in aysan jirin cid Soomaali ah oo su’aashaas ka jawaabi karta.
Ugu dambeyn Musharax Daahir Geelle ayaa sheegay in hubanti la’aanta siyaasadeed ee dalka kajirta ay sababtay in aan la ogeyn xilliga ay dhacayaan doorashooyinka, taasi ay keeni karto xasilooni la’aan dalka ah, wuxuuna si cad u sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in waqti kooban ku qabato doorashooyinka
SAHANKA DALJIR: DIRI DHABE ILLAA SHINIILE (daawo)
Mareykanka oo baaq u diray Madaxda Maamul Goboleedyada